विश्व हातधुने दिवस : विभिन्न रोगबाट बच्ने अचुक औषधि हातधुने बानी « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 15 October, 2021 7:21 am
काठमाडौँ । आज अक्टोबर १५ अर्थात् विश्व हातधुने दिवस । स्वस्थ रहन तथा विभिन्न रोगलाग्न नदिनको लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यकासाथ १५ अक्टोबर २००८ देखि संसारभर विश्व हातधुने दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । अरुकोको ज्यान बचानुहोस्–आफ्नो हात धुनुहोस् भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको विश्व हातधुने दिवस मनाइँदै छ ।
अझ कोरोना भाइसरको रोकथाम तथा सङ्क्रमणबाट बच्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हातधुने बानीको विकास गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । साबुन पानीले हात धुने गरेमा हामीलाई रोग या संक्रमणबाट मात्र जोगाउँदैन अनावस्यक अस्पतालको खर्चसमेत बचाउँछ । विश्वभरि नै हात सफा नभएका कारणले नै विभिन्न रोग र संक्रमण फैलने गरेको र त्यसैको कारण लाखौंको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।
झाडापखला फैलनुको मुख्य कारणको रुपमा हात सफा नहुनुलाई नै मानिन्छ । विश्वभर बर्सेनि लाखौं बालबालिकाको मृत्यु यही झाडापखालाकै कारण हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले देखाउँछ । हरेक ३ जना बालबालिकामध्ये एकमा झाडापखालाको संक्रमण हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
दिगो विकासको छैठौँ लक्ष्यमा पनि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरसफाई अन्तर्गत हातधुने बानी पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।
हात धुने बानीको विकास गर्नसके बर्सेनि मृत्यु हुने बालबालिकाको यो संख्यालाई हटाउन सकिन्छ । राम्रोसँग हात धोएमा मात्र झाडापखाला जस्ता ४० र श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी २३ प्रतिशत रोग नलनग्ने विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ ।
कसरी धुने हात ?
सफा पानीले हात भिजाउने ।
हातमा साबुन लगाउने र कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म हात मिच्ने ।
हातका सबै औंला, हत्केला र औंलाका चेपचेपमा साबुन पु¥याउने ।
हातको गोलीगाँठादेखि नङको टुप्पोसम्म साबुल पनिले मिच्ने ।
सबैतिर मिचिसकेपछि राम्रोसँग हात पखाल्ने ।
पखालेको हातलाई सफा कपडाले मात्र पुछ्ने ।
कुन कुन बेला हात धुनुपर्छ ?
खाना खानुअघि र खाएपछि,
बच्चाको कपडा वा अन्य सामान चलाएमा,
कुनै पनि जनावरलाई छोएपछि चाहे घरपालुवा भएपनि,
खाना पकाउनु अघि
यी सामान्य अवस्था भएपनि पटक–पटक हात धुने बानी बसाल्नु नै राम्रो हुन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिबन्धको विरोध
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले कोभिडको नयाँ भेरियन्टलाई कारण देखाउँदै आफ्नो देश र